Akashinga izvozvi akavaka-mukati kutsigira iyo IPFS yakaparadzirwa network | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura iyo vagadziri veyakakurumbira Shinga webhu browser kuburikidza neshambadziro kusangana kwekutsigirwa kwe iyo decentralized faira system InterPlanetary Faira Sisitimu .
Nayo Vashandisi vakashinga vava kugona kuwana zviwanikwa zveIPSS zvakananga uchishandisa ipfs: // uye ipns: // zvirongwa. Chinhu chitsva ichi chinowanikwa muBrave desktop vhezheni 1.19.
Nezve IPFS rutsigiro muBrave
Izvo zvinotaurwa kuti kana uchitsvaga kuyedza kuwana iyo IPFS kero kana kuona chinongedzo kune HTTP kune IPFS gedhi, bhurawuza rinokumbira mushandisi kuti atange yavo IPFS node kana kushandisa gedhi kuti uwane IPFS pamusoro peHTTP.
Gedhi rekusarudzika dweb.link, inochengetedzwa neProtocol Labs, iyo inotarisira kusimudzira kweIPSS. Paunosarudza kuisa yako yega node yemuno, iyo go-ipfs package inozotakurwa pane ino sisitimu, iyo inotevera yekuchengetedza inoshandiswa iyo imwecheteyo mashini iyo inoshandiswa kugadzirisa plugins.
Kudzora kupinda kune IPFS muBrave, peji rebasa rakashinga: // ipfs inoitwa, pamwe nebhatani rakakosha mumenyu (Yangu node). Nesarudzo, mushandisi anogona kuisa IPFS Companion plugin maneja wepanzvimbo IPFS inomiririra.
kunze kwaizvozvo kuona zvakavanzika, kugadziriswa kweIPSS kwakaremara mune yega nzira uye kana uchishanda kuburikidza naTor. Iyo IPFS inomiririra cache yakaganhurirwa ku1GB, uye kana cache iri 90% izere, muunganidzi wemarara anotanga kushanda awa yega yega.
Mune fomu yazvino, IPFS inotsigira mubrowser inoshandisa mashandiro kutsigira IPFS node, asi hazvisi zvese zvirongwa zvakaitwa parizvino uye Mune ramangwana, yakavakirwa-mukati rutsigiro rweIPFS webhu zvinoshandiswa zvinotarisirwa, Filecoin kuyedza, kushambadzira kugona, yakagovaniswa kuchengetedza, kudzokorora kudzora uye kugovana zvemukati kuburikidza neIPFS, IPFS kusangana mune Android vhezheni, kupinha zvemukati kune yemuno node, kutaridzika kwekuratidzira kweIPFS basa pabhawa remakero, kugona kushandisa Tor sekutakura kwe IPFS.
IPFS inobatsira kugadzirisa matambudziko sekuchengetedzwa kwekuvimbika (kana iyo yekutanga yekuchengetera yakaremara, iyo faira inogona kutorwa pasi kubva kune vamwe vashandisi masystem), ramba zvemukati censorship (kuvharira, iwe uchafanirwa kuvharidzira ese masisitimu evashandisi pane iko kopi yedata), uye kuronga kupinda mune kusavapo kweinternet kubatanidza kana kana mhando yeiyo nzira yekutaurirana iri murombo (unogona kudhawunirodha data kuburikidza nevatori vechikamu vepedyo munharaunda yemuno).
Pamusoro pekuchengetedza mafaira uye kuchinjana dhata, IPFS inogona kushandiswa sehwaro hwekugadzira masevhisi matsvaSemuenzaniso, kuronga basa renzvimbo dzisingabatanidzwe kumaseva kana kugadzira zvinopihwa zvakagoverwa.
Iyo yakasarudzika faira system IPFS inomira kunze kwekunongedzera zvemukati, panzvimbo yenzvimbo uye nemazita ekumanikidza; MuIPFS, chinongedzo chekuwana faira chakanangana zvakananga nezviri mukati uye zvinosanganisira cryptographic hash yezviri mukati.
Iyo kero yefaira haigone kuchinjika zvisina tsarukano, inogona kungochinjwa mushure mekushandura zvirimo. Saizvozvo, hazvigoneke kuita shanduko kune iyo faira pasina kushandura kero (iyo vhezheni vhezheni icharamba iri pakero imwechete uye iyo nyowani ichave ichiwanikwa kuburikidza neimwe kero, sezvo ichachinja hashi yezviri mukati mefaira).
Tichifunga nezvekuti chinongedzo chefaira chinoshanduka neshanduko imwe neimwe, kuitira kuti isatumise zvinongedzo zvitsva nguva dzese, masevhisi anopihwa kuti abatanidze kero dzisingaperi dzinotarisa akasiyana mavhezheni efaera (IPNS), kana anchor an alias nekufananidza neFS uye DNS yechinyakare (MFS (Inoshandisika File Sisitimu) uye DNSLink).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Akashinga izvozvi akavaka-mukati kutsigira iyo IPFS yakaparadzirwa network